Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Masaajidada Thailand ayaa soo dhaweeya cibaadada mar kale
dhaqanka • Caafimaadka Warka • News • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Wararka kala duwan
Masaajidda Thaialnd mar kale ayaa lagu oggolaaday in lagu tukado
Xafiiska Sheikul Islam (SIO) ee Thailand ayaa oggolaaday in dib loo bilaabo salaadda masaajidda bulshooyinka halkaas oo ugu yaraan 70% dadka jira 18 ama ka weyn laga tallaalo COVID-19.
Thailand waxaa ku yaal ilaa 3,500 masaajid oo tirada ugu badan ku leh Gobolka Pattani oo intooda badan la xiriira Islaamka Sunniga ah.
Waqtiga salaadda ee masaajidda ayaa ku koobnaan doona 30 daqiiqo, marka laga reebo Jimcaha oo laga yaabo inay cibaadaysanayaan 45 daqiiqo.
Tallaabooyinka caafimaadka dadweynaha waa in la raaco oo ay ku jiraan xirashada maaskaro wejiga, fogeynta bulshada, iyo fayadhowrka gacanta.
SIO waxay soo saartay bayaan ay ku sheegtay inay hadda oggolaanayso in salaadda lagu tukado masaajidda bulshooyinka halkaas oo guddiyada Islaamiga ah ee gobollada iyo guddoomiyeyaasha gobolku ay si wadajir ah u go'aamiyeen in la fududeeyo xannibaadaha saaran hawlaha diinta.
Xafiisku wuxuu u baahan yahay in xubnaha guddiga Islaamka ee masaajidda iyo cibaadaysanaya la tallaalo ugu yaraan hal mar. Waqtiga salaaddu wuxuu ku kooban yahay 30 daqiiqo iyo salaadda Jimcaha wax aan ka badnayn 45 daqiiqo.
Sida laga soo xigtay Xafiiska Sheikul Islaam, ka -qaybgalayaashu waa inay si adag u hoggaansamaan tallaabooyinka caafimaadka dadweynaha iyo ogeysiiska SIO. Waxaa laga rabaa in la hubiyo heerkulka jirkooda ka hor intaan masaajidka la gelin, in la xidho maaskaro wejiga, oo meel kasta u dhaxaysa 1.5 ilaa 2 mitir saf kasta inta lagu jiro salaadda. Saliidda gacmaha lagu nadiifiyo waa in la helaa.
Thailand waxay leedahay 3,494 masaajid, sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Qaranka ee Thailand 2007, oo leh 636, oo ugu badan hal goob, Gobolka Pattani. Sida laga soo xigtay Waaxda Arrimaha Diinta (RAD), boqolkiiba 99 masaajidda waxaa lala xiriiriyaa Islaamka Sunniga halka boqolkiiba hal ee soo hartay ay tahay Shiicada Islaamka.
Tirada dadka Muslimiinta ah ee Thailand way kala duwan yihiin, iyadoo qowmiyadaha ay ka soo haajireen ilaa Shiinaha, Pakistan, Cambodia, Bangladesh, Malaysia, iyo Indonesia, sidoo kale ay ku jiraan qowmiyadda Thais, halka qiyaastii saddex-meelood laba ka mid ah Muslimiinta Thailand ay yihiin Malay Malay.
Guud ahaan rumaystayaasha caqiidada Islaamka ee Thailand waxay raacaan caadooyinka iyo caadooyinka qaarkood ee la xidhiidha Islaamka soo jireenka ah ee ay saameeyeen Suufiyadu. Muslimiinta Thai-ga, sida kuwa wada-diintooda ah ee ku nool Koonfur-bari Aasiya ee waddamada kale ee Buddhist-ka u badan, Mawliid waa xusuusin astaan ​​u ah joogitaanka taariikhiga ah ee Islaamka ee dalka. Waxay sidoo kale u taagan tahay fursad sannadle ah oo lagu xaqiijinayo maqaamka muslimiinta ee ah muwaaddiniinta Thailand iyo daacadnimadooda boqortooyada.
Caqiidada Islaamka ee Thailand waxay inta badan ka tarjumaysaa caqiidooyinka iyo dhaqamada Suufiyada sida dalalka kale ee Aasiya sida Bangladesh, India, Pakistan, Indonesia, iyo Malaysia. Waaxda Islaamka ee Wasaaradda Dhaqanka ayaa abaalmarino siisa dadka muslimiinta ah ee ka qayb qaatay dhiirrigelinta iyo horumarinta nolosha Thai doorka ay ku leeyihiin muwaadiniinta, barayaasha, iyo shaqaalaha bulshada. Magaalada Bangkok, xafladda weyn ee Ngarn Mawlid Klang waa bandhig firfircoon oo loogu talagalay bulshada Muslimka ah ee Thai iyo qaab -nololeedkooda.